Waa Waqtigii Kor Loogu Qaadi Karo Akhriskaaga Akhriska Kuwa dhintay | Martech Zone
Waa Waqtiga Kor Loogu Qaadi Karo Akhriskaaga RSS Kuwa Dhintay
Khamiista, Noofembar 12, 2020 Khamiista, Noofembar 12, 2020 Douglas Karr
Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, quudintooda wali waxay dhex mushaaxayaan wajiga internetka… ama ugu yaraan godka adduunka. Isku-darka mawduuca waxaa laga yaabaa inay ku baabba'een codsiyo iyo websaydhyo ka badan dadka isticmaala akhristaha quudinta… laakiin fursadda lagu hubinayo in waxyaabahaaga la qaybiyay oo ay u muuqato mid aad u fiican dhammaan aaladaha ayaa wali lagu daray istiraatiijiyadda content
Fiiro gaar ah: Haddii aad lumisay - waa kan maqaal ku saabsan waa maxay RSS feed.
Waan naxay markii aan eegay akoonkeenii hore ee Feedburner si aan u arko inay weli jiraan 9,000+ isticmaaleyaal oo ka daawanaya waxyaabahayaga adoo adeegsanaya quudkeena maalin kasta… wow! Markaan bilaabay inaan eego bogagga kale, waxay ku lahaayeen 50,000 + akhristayaal bogagga qaarkood. Waa kuwan waxyaabo yar oo aan qabannay si aan kor ugu qaadno quudintayada RSS ka dhimashada iyadoo la adeegsanayo WordPress.
Hubi inaad haysato dhaji thumbnails karti boggaaga kuna dar calaamadaha loo baahan yahay si maqaalladaadu u leeyihiin muuqaal muuqaal ah. Tani waxay suurtogal ku tahay WordPress adoo adeegsanaya SB RSS Feed Plus plugin loogu talagalay WordPress ama waxaad qori kartaa shaqadaada.
Hirgelinta FeedPress si aad ula socon karto oo aad u cabbiri karto isticmaalka quudintaada oo aad u gujin karto heerka, u habeyn karto URL-ka quudintaada, kuna riixdo quudintaada marinnadaada bulshada.
Kudar cilad xuruuf leh ama wac ficil salka quudintaada leh a WordPress SEO plugin. Waxaan qabannaa dadka wax xadaya oo dib u daabacaya quudkeena markasta waana ay carrab la'yihiin inay ku xafidaan xuquuqdeena xuquuq marka ay daabacayaan.
Ku dar cinwaankaaga quudinta miiskaaga oo dhig meel ka mid ah boggaaga adoo isticmaalaya calaamadda caalamiga ah ee quudinta RSS.
Ku dar astaamaha cinwaanka loo baahan yahay mawduucaaga inta u dhexeysa calaamadaha madaxa si codsiyada iyo daalacayaashu ay u helaan cinwaankaaga quudinta, halkan waxaa ku yaal lambarka cinwaankayaga quudinta:
Dila Feedburner oo keen FeedPress nolosha:
Waxaan ka dheregnay Feedburner oo aan hirgelinay FeedPress boggayaga. Waa barxad falanqeyn quudin buuxda leh oo leh astaamo dheeri ah oo dheeri ah sida kartida CNAME quudintaada si aadan ugu tiirsaneyn da'daas gubiyaha URL. Marka, waxaan hayaa subdomain-ka https://feed.martech.zone noo diyaari quudkeena!
Waa tan sida loogu beddelo boggaaga FeedPress:
FeedPress wuxuu hayaa tan kale oo xulashooyin ah si loo habeeyo loona hagaajiyo quudintaada:
Daabacaadda Warbaahinta Bulshada - FeedPress sidoo kale waxay leedahay waxyaabo la yaab leh isdhexgalka bulshada halkaas oo aad si toos ah ugu daabici karto dhammaan waxyaabaha cusub ee la daabacay dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada.
Dabagalka Quudinta - Warbixin horumarsan oo sax ah oo ku saabsan inta macaamiil ee aad haysato, meesha, iyo sida ay macaamiishaasi u cunayaan quudkaaga.
Warsidaha Emailka - Bilaash 1000 macmiil ama ka yar. Awood u yeelo muuqaalka joornaalkooda oo ku soo qaado lambarkooda foomka isdiiwaangalinta si aad ugu darto boggaaga
Ogeysiiska riix - Ogeysiis riix ah oo firfircoon adoo adeegsanaya PubSubHubbub si aad ugu wargeliso macaamiisha quudinta waxyaabahaaga cusub.
Habaynta Mawduuca - Ku dar cinwaan iyo astaan, soo koob mawduucaaga, wax ka beddel akhriska qoraalka badan, hagaaji tirada qodobbada.
Shahaadada Sugan - Fulinta SSL si loo kordhiyo gaarsiinta.
Is dhexgalka Google Analytics - La socoshada UTM otomaatig ah markay akhristayaasha quudiyaan guji boggaaga.
Qaabab Kale - Quudintaada waxaa lagu cuni karaa XML, JSON, ama HTML.
WordPress Plugin - Hadaad kujirto WordPress, waxay bixiyaan shey si ay wax waliba ufududeeyaan!
Xusuusin: Waxaan ku soo daray URL xiriir la leh FeedPress - oo kugula talin madal pro!
Tags: beddelaadcodsiga rss xmlka beddelo feedburner una beddelo feedpressfeedastaanta quudintagubiyahaquudinquudintacinwaanka cinwaanka ee quudintasida loogu daro xuquuqda lahaanshahaagasida loogu daabaco bulshadajson quudinrss feedastaanta rssrss bulshadarss xmlsb RSSs feed plus pluginWordPressplugin WordPress